Dispatch ဘေဆယ် Limousine ဝန်ဆောင်မှု & လေဆိပ်လွှဲပြောင်း☆တက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ်
ဘေဆယ်လေဆိပ်ကြိုပို့ & တက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ်
အဆိုပါတစ်သက်တာ၏ dispatch အလွယ်တကူတတ်နိုင်နှင့် A ကနေခမှအဆင်ပြေ get တက္ကစီများကလေဆိပ်လွှဲပြောင်းခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်ဘေဆယ်အတွက်ဘေဆယ်လေဆိပ် Limousine Service ကိုကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စျေးသက်သာစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များလုပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်ပုံစံမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ် + 41 78 861 35 50 မှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ။
der Dispatch ဘေဆယ် အဆိုပါစျေးပေါတက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ်နှင့်အတူသပ်သပ်ရပ်ရပ် Limousine Service ကိုဘေဆယ်နှင့်ဇူးရစ်လေဆိပ်လွှဲပြောင်းဘို့။ (ဖြစ်ရပ်များသည်, ကုန်သွယ်ရေးဝိုင်းအနုပညာဘေဆယ်, Baselworld), အစည်းအဝေးများ (WEF ဒါးဗို့,), အထူးအခါသမယ, စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အပျော်အပါး။ သူတို့ကစောစောစီးစီးကနေပျံသန်း? နှောင်းပိုင်းတွင်ညဦးယံ၌လာကြသို့မဟုတ်အိတ်တွေအများကြီးရှိသည်? ထိုအခါသင်က, အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူများမှာ လေဆိပ်ဇူးရစ်လွှဲပြောင်း နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏, ဘေဆယ်ရုံပိုင်ခွင့် တက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ် သွားလာရင်းအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဘေဆယ်လေဆိပ်လွှဲပြောင်း မော်တော်ယာဉ်များအထိ7ကလူနှင့်သင့်အိတ်များအတွက်အာကာသရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နဲ့အဆင်ပြေန်ဆောင်မှုများ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
ရိုးရှင်းစွာအသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခ calculate ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှု: တက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ်အားဖြင့်လေဆိပ်လွှဲပြောင်း,Limousine service ကို
Limousine ဝန်ဆောင်မှု & တက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ် - အကောင်းဆုံးမောင်းနှင်ပြုလုပ်ခြင်း!
ဘေဆယ်၌အကြှနျုပျတို့၏လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှုမှကြိုဆိုပါ၏! သငျသညျအကူးအပြောင်းအတွက်ကိုမွို့သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးသီးသန့် Limousine Service ကိုဘေဆယ်ဖို့တစ်ဦးလွှဲပြောင်း drive ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အမြန်တက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ်ရှာနေလဲ? ဤအမှုအလုံးစုံပြီးအများကြီးပိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေ, လေ့ကျင့်သင်ကြားယာဉ်မောင်းများနှင့်တစ်ဦးအဘို့ သီးသန့်ယာဉ် ရရှိနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ဘေဆယ်အတွင်းလေဆိပ်လွှဲပြောင်းအပါအဝင်, မြို့အတွင်းပိုင်းကိုသင်မောင်းနိုင်ပါတယ် Baselworld အနုပညာဘေဆယ်။ ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးများမှာအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီ။ သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Limousine ဘေဆယ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအဘို့ဒါးဗို့မှစာအုပ်အဖြစ်အခြားမြို့များမှခရီးစဉ်များအတွက်လုပ်နိုင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ Dispatch WEF ဒါးဗို့, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ဘေဆယ်နှင့်ဇူးရစ်အတွက်သီးသန့် limousine ရရှိရန်ယခုဤအချိန်ကိုယူသွားပါ!
Limousine Service ကိုဘေဆယ် - ဘေဆယ် မှစ. ဇူးရစ်လေဆိပ်မှ
ဘေဆယ် ဧည့်သည်သန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးဆွစ်ဇာလန်, ဂျာမနီသို့မဟုတ်ပင်လယ်ကွေ့ပြည်နယ်ကနေနှစ်စဉ်ရကျေနပ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကသာသူတို့မှာလည်းမိုဘိုင်းဖြစ်ချင်တယ်, သင်တန်း, မွို့၌အကြောင်းကိုတစ်သန်းနေ့ချင်းညချင်းပဲကျန်ရှိနေစာအုပ်ဆိုင်။ ဘေဆယ်လေဆိပ်တက္ကစီနိုင်သောတစ်ဦးက B ကိုမှဆွစ်ဇာလန်အတွက်တတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာရှိတဲ့ဥပမာ, ဘေဆယ်ထံမှဇူးရစ်ဖို့လေဆိပ်ကနေ။ မည်သည့်မြို့ပြ destination သည်သို့မဟုတ်အခြားမြို့မှလွှဲပြောင်းဖို့ဟိုတယ်ကနေတစ်ဦးကစီးနင်း။ သို့မဟုတ်ပင်ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းပြည်! ဤရွေ့ကားဘေဆယ်၌အကြှနျုပျတို့၏မြို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Limousine ဝန်ဆောင်မှုအများအပြားလာရောက်လည်ပတ်သူစာအုပ်ဆိုင်ရာမှတိကျစွာအဖြစ်အပျက်တွေကိုဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ခရီးသွားဧည့်နှင့်စီးပွားရေးခရီးသွားများအတွက်ဘေဆယ်၌အကြှနျုပျတို့၏သီးသန့်လေဆိပ်လွန်းကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်ဘေဆယ်မှာသူတို့ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ limousine service ကိုစာအုပ်ဆိုင်။ သို့သော်သူကိုရိုးရှင်းစွာတကြိမ်အနေနဲ့မမေ့နိုင်သောစီးနင်းဆန္ဒကိုမည်သူမဆိုတစ်ဦးမွေးနေ့တစ်ခုသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဥပမာဘေဆယ်၌အကြှနျုပျတို့၏ Limousine ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကောင်းစွာတတ်! ငါတို့သည်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ transferservice-basel.ch နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလွန်းဝန်ဆောင်မှု၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြသည်။ သငျသညျထို့ကွောငျ့အခွားသော Canton သို့မဟုတ်နိုင်ငံများ၌ငါတို့မှမသွားလိုပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါ!
တစ်ဦး limousine ဝန်ဆောင်မှု / တက္ကစီများအတွက်စံပြအခါသမယ upscaling ဘေဆယ်လေဆိပ်
သို့သျောကြှနျုပျတို့ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဘေဆယ်ရဲ့မြို့ကန့်သတ်အတွက်ကနဦးတည် 23 စတုရန်းကီလိုမီတာအမှန်ပင်ဧရိယာ: သင်ဘေဆယ်မှာနေထိုင်သို့မဟုတ်ဤနေရာတွင်အချို့သောအချိန်ဖြုန်းယူဆရင်, ဘေဆယ်၌အကြှနျုပျတို့၏ Limousine service ကိုအတူဘွတ်ကင်အဘို့ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဘေဆယ်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်ကမ်းလှမ်းရန်တကယ်အများကြီးထိုကဲ့သို့သောများစွာသောလူအဖြစ်တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ဤသည်နေထိုင်သူများနှင့်ဧည့်သည်များမှနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မြို့ထဲမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုသူများသည်, စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အပျော်အပါးအဘို့ဖြစ်စေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပသောမြို့အတွင်းဆိုက်ရောက်၏နောက်ဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူသွားနိုင်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်နိုင်ငံရေးသမားများ, နာမည်ကြီးတွေသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတွေကိုသူတို့ကသတိနဲ့သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးထားသောကွောငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူတစ် limousine ငှားချင်တယ်။ ဒီတော့ဘေဆယ်၌ငါတို့နှငျ့ limousine ငှားရမ်းခြင်းနှင့်သီးသန့်လေဆိပ်တက္ကစီအဖြစ်အသုံးပြုရန်သူကိုဥပမာ, ဝန်ကြီးများ, ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ, အကြီးတန်းမန်နေဂျာသို့မဟုတ်သံတမန်များရှိပါတယ်။ ဘေဆယ်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သော Novartis, Roche နှင့်အခြားသောအကြားပုံမှန်ဘေဆယ်ဖို့အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလည်အပတ်ခရီးအိမ်ရှင်အဖြစ်ရာ, ဆှစျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းအဖြစ်လူသိများကုမ္ပဏီများ, ထိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဘေဆယ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အပန်းဖြေခရီးစဉ်ဘေဆယ်အတွက် limousine အမြတ်ရခြင်းအဘို့အလိုပါသလား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်များအတွက်, သငျသညျအတိအကျကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူလက်ျာမော်တော်ယာဉ်နေရာညာဘက်မှာရှိတဲ့ညာဘက်အချိန်တွင်ငှားနိုငျပါသညျ! ဒါကပုဂ္ဂလိကခရီးများအတွက်အဖြစ်ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လည်းမှန်တဲ့ခရီးစဉ်ကိုအမြဲတန်ဖိုးရှိအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဘေဆယ်ဖြစ်ပါသည် (နှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏လေဆိပ်လွှဲပြောင်းဇူးရစ်ဖို့ဇူးရစ်ကနေရောက်လာမှစာအုပ်ဆိုင်လျှင်) ။ ဒီမှာလည်းမရှိ ဆငျဖိုနီထို Kunstmuseum ဘေဆယ်ထို ရှုပ်ထွေးဘေဆယ် ဒါမှမဟုတ်အမျိုးအစားအကောက်ခွန်, အဘေဆယ်ကနေ Fasnacht ပြီးအများကြီးပိုလုပ်ပါ။ ဤအတိုးရစ်ဆွဲဆောင်မှုများအပြင်လည်းရှိပါတယ်အဆိုပါ upscaling တက္ကစီဘေဆယ်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ထဲမှာသည်အသက်တာ၌မီးမောင်းထိုးပြ။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ limousine ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါမင်္ဂလာဆောင်, မွေးနေ့သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်အဘို့။ စတိုင်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ Limousine service ကိုဘေဆယ်နှင့်အတူအောင်နိုင်။
Limousine Service ကိုဘေဆယ် - ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်များ Canton အကြီးအကဲမြို့မှာ
အဘယ်ကြောင့်သင်ကမြင့်မြတ်သောတက္ကစီဘေဆယ်ဖို့လိုသလဲ သငျသညျဘေဆယ်အားဖြင့်တစ်ဦးသီးသန့်အကူးအပြောင်းသို့မဟုတ် Stadtrundahrt ချင်သောကြောင့်, အရည်အသွေးမော်တော်ယာဉ်များ, discrete ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ? ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ VIP လွန်းဘေဆယ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ limousine ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မော်တော်ယာဉ်များအားဖြင့်အာမခံသည်။ တစ်အတန်းထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအကြီးအကျယ်ကိုအကောင်းဆုံးကားတစ်စီးထုတ်လုပ်သူရဲ့ထိပ်လူတန်းစားအပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည်။ လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေစီးနင်းအာမခံနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ဂျာမနီမှာလုပ်မော်တော်ယာဉ်အရည်အသွေးပေါ်အာရုံစူးစိုက်: ကျွန်တော်တို့ကိုအတူဘေဆယ်၌သင်တို့၏ Limousine ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သင်ရုံသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့သွားပါလေစေနေရာတိုင်းမှာသင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွို့၌သက်သာခံစားရချင်တယ်။ ဒါကကျနော်တို့သယ်မသာသောကွောငျ့အကြှနျုပျတို့ကိုကျွန်တော်တစ်ဦး limousine ဝန်ဆောင်မှုများမှာ, စျေးနှုန်းတက္ကစီရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ထူးခြားမှုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နောက်ပြီး-ထိပ်တန်းယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ကားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်:
•မာစီဒီး, E Class ကို
•မာစီဒီး, E Class ကို Estate
•မာစီဒီး Viano (8 သောအရပ်တို့ကိုမ)
•မာစီဒီး S-Class ကို
• VW တို့ Passat Kombi
• VW တို့ Touran
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ limousine ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မော်တော်ယာဉ်များဖြစ်သည့်သီးသန့်လေယာဉ်ကွင်းလွန်းအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အပြောင်းအရွှေ့များအတွက်သို့မဟုတ်ပိုကြီးသောအုပ်စုများနှင့်ခရီးစဉ်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်အဘို့အကြှနျုပျတို့သညျ "အစမှာ" အကောင်းဆုံးကိုမော်တော်ယာဉ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည် client များဆောင်ကြဉ်းနှင့်သင်သွားလေရာရာ၌ဒီ transferservice-basel.ch အတွက်အကျယ်ချဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကိုယူပါ။
တက္ကစီဘေဆယ်လေဆိပ်ကြိုပို့ - ဘေဆယ်ထံမှဇူးရစ်လေဆိပ်မှမသာ
ဒါဟာသင်ချင်တယ်ဘယ်မှာဘေဆယ်လေဆိပ်ခံ "သာ" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VIP လွန်း, နေရာတိုင်းကတကယ်တော့သင်ကအရွက်တက္ကစီမရှိပါ။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ, သင်သာတစ်ဖွဲ့လုံးကဘေဆယ်ပေမယ့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသွားရောက်ကြည့်ရှု။ သူတို့ကဇူးရစ်လေဆိပ်မှဘေဆယ်၌သင်တို့၏လေဆိပ်လွှဲပြောင်းနှင့်အတူမောင်းနှင်ခံရဖို့လိုခငျြသို့မဟုတ် Bern chauffeured ရမည်လော ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်သည်လည်းငါတို့သီးသန့်မော်တော်ယာဉ်များတွင်ဤကားတစ်စီးဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။ သို့သော်မသာကြောင်း, သင်တန်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Limousine Service ကိုနိုင်ငံတကာမှာလုပ်ကိုင်, သင်ဂျာမနီ, စတုဂတ်သို့မဟုတ်မြူးနစ်အတွက်အနိုင်နိုင် 70km ဝေးလံခေါင်သီ Freiburg သွားကြိုက်တယ်။ ဒါ့အပြင်လီချင်စတိန်း, ပြင်သစ်, အီတလီနှင့်ပြင်သစ်သင်တို့သည်ငါတို့၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအဘို့ရည်ရွယ်ထားနိုင်သောအလားအလာပစ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့် limousine အတွက်နှစ်သိမ့်မဟုတ်သလိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုလည်းမဘာမျှမကင်းမဲ့ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးက propos: အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒရိုင်ဘာဟာသူ့ရဲ့သတိအသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့သမ္မာသတိရှိသောမောင်းနှင်မှုများကသာသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ဒါဟာသင်အချိန်သင့်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုအပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်မောင်းလမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိမြို့ပြအဖြစ်ခရီးဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြပြီးနှစ်သက်တဲ့ destination သို့လည်းဘေးကင်းလုံခြုံအဖြစ်နည်းတူတိဆောင်ခဲ့ရမည်။